SIR CULUS+AKHRISO: Dawladdo (CARAB) Islaami ah oo Kenya gacan ka siinaya in ay la wareeegto Badda Soomaaliya? | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia	Sunday, September 25th, 2016	Home
SIR CULUS+AKHRISO: Dawladdo (CARAB) Islaami ah oo Kenya gacan ka siinaya in ay la wareeegto Badda Soomaaliya?
Sep 25, 2016 - 1 Jawaab	MUQDISHO(PTIMES)- Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay Soomaaliya & Kenya isla fuuleen Maxkamadda Dambiyad Caalamiga ah ee ICJ, waxaa banaanka u soo baxay wadamada gacanta ku lahaa iyo shaqsiyaadka doonayey in ay Kenya qaadato qeyb kamid ah biyaha Badda ee Soomaaliya.
Nuqulo waraaqo ay is dhaafsadeen dawladdaha Kenya & Sacuudi Careebiya ayaa banaanka soo dhigaya Is afgarad labada dal dhexmaray, kaas oo dhabaha u xaaraya Is faham guud, waxayna Sacuudigu doonayeen in ay saameyn ku yeeshaan dhulka lagu muransan yahay.
Wasiirkii Arrimaha dibada ee dalka Sacuudi Careebiya Amiir Sacuud ayaa warqad uu ka helay Kenya waxay xooga saaraysay in ay Kenya u baahan tahay kaalmada Boqortooyada Riyad Puntlandtimes.com, si ay u hesho Badda lagu muransan yahay, taas bedelkeedana ay Kenya u ogolaan doonto Shirkadaha Sacuudiga in ay Kheyraadka Baddaas faa’iido ku yeeshaan.
Jawaabtii uu diray Wasiirkan Sacuudigaa waxaa ku cadeyd in ay Riyad u riyaaqday soo jeedinta Nairobi, Puntlandtimes.com sidaasna ay ku gashay kiiska ah in ay Kenya qaadato qeyb kamid ah Biyaha Soomaaliya.
Sida ka muuqata warqadii Jawaabta celinta ah wuxuu ku yiri Amiir Sacuudka, Sacuudi Careebiya sidan ‘’ Waxaa waajib nagu ah in aan la shaqeyno dawladda Kenya, garabna ka siino sidii ay uga guuleysan lahayd dalka yar ee Soomaaliya, waxaana annaga Boqortooyadu eeganaynaa danaheena gaarka ah” Ayaa lagu yiri qoraalkan oo ahaa mid xasaasi ah.
Arrinta kale ee la yaabka leh ayaa ah in ay Sacuudi Careebiya ku qeexday warqadaas in ay doonayso in aysan dawlad noqon Soomaaliya, si gaar ah waxaa loo yiri ‘’si aan u helno Soomaaliya oo aan laheyn awood waa in aan dhisnaa 5 dawlad gobaleed oo aan ka soo horjeedin Nidaamka faderaalisimka oo ay Soomaalidu hadda rabto’’ ayaa lagu yiri isla qoraalkan.
Cida ay Sacuudi Careebiya u adeegsanayso arrintaas waxaa lagu sheegay in ay noqonayso dawladda Itoobiya, oo isla qoraalka lagu cadeeyey in ay saameyn siyaasadeed iyo ciidanba ku leedahay gudaha dalka ay jaarka yihiin ee Soomaaliya oo dawlad la`aan ahaa 20-kii sanno ee lasoo dhaafay.
Tanni waxay cadeyn u tahay in ay dawladdo badan oo Carbeed ay saameyn ku yeelan doonto dacwadda Badda ee u dhaxeysa Soomaaliya & Kenya, waxaana Kenya ay balan qaadyo lacageed iyo Mashaariic horumarineed ka haysataa dawladdahaas oo eeganaya oo kaliya danahooda gaarka ah.
Soomaaliya ayaa ah dal muslim ah, waxaana marar badan soo gaaray Mu’maarado uga yimid wadamada ay Islaamka wadeen, gaar ahaana Sacuudiga oo dagaalkii 1977-diina ay ahayd cidii abaabushay dagaalkaas oo Soomaaliya u horseeday burburka iyo dawlad la`aanta mudada dheer ay ku jirtay.
FIIRO GAAR AH: XOGTAN WAXAY GAAR U TAHAY PUNTLADTIMES.COM, FADLAN HA XADGUDBIN, wuxuuna dhawaan soo bandhigayaa Qoraaladii lagu wada hadlay oo Xasaasi ah….
M A omar says:	September 25, 2016 at 5:59 pm	Sacuudi Carabiya maaha wax cusub ooy manta bilawday 65 sannadood bay laaluush malaayiin doolara ku bixinaysay si aan loo soosaarin Shidaalka somaliya.
Siyaasaada sacuudiga waxaa kow ka ah. in aad loola dagaallamo horumar ka hirgala iyo mashaariic ka hanaqaada Somalia. Shidaal Somalia kujira waa kan uGu badan adduunka waana kan Sacuudiga adhexda kajibin kaara haddii la soosaaro,
Dhanka Muslinimada:- Iraaq, Yemen, Libiya, Suriya, Aljeeriya,Soodaan,Iiraan, Nigeria; waxaa burburkooda ka dambeeya sucuudiga oon doonahayn inuu arko dawlad muslina oo madax kor u qaada.Yaa Kuweit iyo Iraq madaxa isu geliyey, si loo baabiyo Iraq, yaa Somalia madaxa u geliyey dagaalkii 1977 dabadeedna kaga baxa oo xaga kale kazoo jeestey.
haddii aan arrinta sacuudiga galo inaan ka faallodo waxay uGu qaadanaysaa sanooyin. waayo waxa badan ka ogahay ilaa Skeikh Saki Al-yemani oo ahaa wasiirkii petrolka sacuudiga 1970 illaa 1987.
Somalidu ha ogaato waxa qaybiyey ee gobolgobolka u jarjarey somaliya ina tahay sacuudiga. iminkana wuxuu u adeegsadaa Isutaga Emaaraadka Carabta oo isaga ka amar qaadata, Somalidu ha ogaato qorshaha sacuudiga ee Somalia hoos geeynaya Ethiopia oo soo bilaamay 1977kii wixii ka dambeeyey. Somaliyey intaad isku maqan tihiin waa laydinku maqan yahay.
waxaa hayaa siro badan waxaana ku noolahay dibada somaliya